We Solve Problems Menu
Guides HTML and CSS
Author: Abdi Mallow	Waa Maxay Fayrska WannaCry, Sideese u Shaqeeyaa?Posted on May 23, 2017	WannaCry waa nooc ka mid ah fayrasyada madax furashada, waxayna ku dhufteen ayaan dhoweyd shirkado waaweyn iyo xarumo dowladeed oo ku yaal meelo ka mid ah yurub, shiinaha, ruusha iyo Maraykanka.
Fayarasyadda madax furasha waa nooc ka mid ah sooftiweerada wax qariba kuwaas qofka u diida inuu isticmaalo kumbuyuutarkiisa isla markaana ugu goodiya inay tirtirayaan xogtiiisa iyo faylasha ugu jira.
Side u shaqeeyaa WannaCry?
Fayraskan ayaa maldaha xogta kuugu jirta kumbuyuutarka uu ku dhacay isaga oo qofka u qabanaya ruuxa mudo inuu ku bixiyo lacag cayiman haddii kale laga tirtirayo.
Lacagta uu dalbanayo ayaa lagu qaadayaa qaab loo yaqaan Bitcoin oo ah qaab danabeed.
Ma ka nabadgali kartaa fayraskaan?
Sida laga soo xigtay Microsoft, haddii kumbuyuutarkaaga uu ku shaqeeyo Windows XP ama Windows 8 waxaad u tahay daleel in uu ku haleelo balse haddii aad adeegsanayso windows Vista, Windows 8.1, windows 7 ama windows 10 waxaa kugu filan oo kali ah inaad update garaysid.
Haddii uu kugu dhaco fayruuskan waxaad si toos ah ula soo xiriiri kartaa shirkadda Maskax Tech si ay talo kaaga siiso.
Waakan ShareTwitterFacebookGooglePocketLinkedInEmail	Indho Indhayn Golaha Wasiiradda SomaliaPosted on March 21, 2017March 21, 2017	Markii lagu dhawaaqay Golaha Wasiiradda waxaa isla markiiba soo shaac baxday aragtiyo kala duwan oo shacabka Soomaaliyeed.
Dadka qaar waxay ku andacoonayaan in dowladaani tahay midii Damuljadiid oo aan biyo ismarin dadka qaarna waxay ku andacoonyaan xukuumadani aysan uba dhawayn dhinaca tayadda dowladii ka horeysay ee Xasan Sheikh Madaxda ka ahaa.
Continue reading “Indho Indhayn Golaha Wasiiradda Somalia”
Waakan ShareTwitterFacebookGooglePocketLinkedInEmail	Sidee loosoo Celiyaa Falaash fayras kaa qariyeyPosted on January 11, 2017	Sidee loo soo celiyaaa falaashta marka virus kaa cuno faylasheeda. marar badan ayey dhacdaa in falaash xog muhiim ah kuugu jirto uu virus kaa qariyo isla markaana aad is weydiisid ma la soo celin karaa tolow?.
Waxaa dad badan ay ku dhahayaan isticmaal USB show oo ah program kuu fududeynaya inaad soo saartid faylashaada.
Markasta ma haysatid USB show sidaa darteed waxaan go’aan saday inaan idinla wadaago qaab sahlan oo aad kusoo ceshan kartid adigoo isticmaalaya computerkaaga kali ah.
haddab si aad u soo celiso raac talaabooyinkaan. Fadlan taxadar muuji waayo ma shaqaynayaan haddadan si wanaagsan ula socon.
Step 1: ka raadi computerkaaga CMD ka dibna ku dhufo. fadlan meesha wax laga baaro ka baar si aad u hesho shaashada madow ee command prompt.
Step 2: marka CMD kuusoo kaco hubso in falaashtaad ay soo qabsatay badanaa waxay soo qabsataa drive-yada (E:) ama (F:) hubso drive-ka ay ku jirto
Step 3: ka dib ku qor F: ama E: hadba midka ay ku jirto oo enter dheh. fadlan si dheer u hubi drive-ka ay ku jirto. tusaale ahaan waxaad arkaysaa “magaca falaashta (E:)” u qoran marka waxa aan rabno ma ahan magaca falaashta ee waa xarafka ku horqoran. wuxuuna noqon karaa xarfaha aan ka ahayn C: iyo D: inta badan.
Step : 4 kadib qor attrib -s -h -r /d /s oo enter dheh. Fadlan dhug u yeelo space-yada iyo xarfaha sida ay iskugu xigaan waxaa laga yaabaa inay wax kaa qaldamaan.
Step 5: ka dibna soo fur falaashtaada oo fiiri inay soo noqotay isla markaana waqtigaaga muhiimka ah qaado.
intaas marka aad samayso waxaad taqaan sidee usoo celin lahaa falaash iga qarsoontay. Sii bar dadka oo hakala baqaylin.
Haddii ay kugu adkaato sidee loosoo celiyaa markasta waxaa kuu jooga maskax.com iyo kooxda faraha fudud ee hogaamiya ha ilaawin inaad hoos kusoo qortid dhibtaada.
maskax.com waxaa ka go’an inay idinla wadaagto xog kasta oo idinka haqab tiraysa cilmi iyo caqlina idiin soo kordhinaysa.
haddii aad rabto inaad dhowr commands baratid halkaan ka fiiri qormo yar ama qaybta labaad halkaan ka fiiri.
Waakan ShareTwitterFacebookGooglePocketLinkedInEmail	Imtixaan Walba Sidee Loogu Gudbaa si fududPosted on December 28, 2016April 14, 2017	Dad badan ayaa waxaa dhibi ka qabsataa ama ku adkaataa sidii ay u gudbi lahaayeen imtixaan kasta oo ay galaan. Dadkaasi ha u galaan imtixaanka dugsiga sare, jaamacad, xirfad iyo shaqooyin.
dadka caynkaas ah waxaa la arkaa inay helaan natiijooyin hooseeya imtixaan walba oo ay galaan ha adkaado ama ha fududaado.
Maskax.com oo kaashanaysa khibradeeda iyo cilmi baarisyo ay samaysay waxay idiin soo gudbinaysaa sidii aad ku gudbi lahaydeen imtixaan kasta oo aad gashid si kasta ha u adkaadee.
Waxaan kuusoo bandhigaynaa talaabooyin kala duwan oo ay tahay inaad raacdid si aadan ugu jahawareerin qoraalkaan laftigiisa.
Marka hore dhowr daqiiqo qaado oo naftaada qiimee su’aalahaana ka jawaab
Ma welweshaa daqiiqadaha ka horeeya imtixaanka?
Ma dareentaa quus iyo in wax weyn kaa maqanyihiin?
Qiyaas ma kasii bixisaa su’aalaha kuu imaan doona?
Diyaargarowgaaga ma dhaliishaa waqtiga ka horeeya imtixaanka?
Cida imtixaanka kaa qaadaysa ma canaanataa inaysan keenin imtixaan xaq ku salaysan?
haddii aad haa uga jawaabtay mid ka mid ah su’aalahaas xalkaagu waa fududyahay. Fadlan raac talaabooyinkaan si aysan mar labaad kuugu dhicin dhibaatadaan oo kale. Continue reading “Imtixaan Walba Sidee Loogu Gudbaa si fudud”
Waakan ShareTwitterFacebookGooglePocketLinkedInEmail	Waxaan diyaarinay qaabab cusub oo shaqoPosted on December 26, 2016December 26, 2016	Fekerkaaga ma ku jirtay inaad hesho website kaa haqabtira la socoshada iyo la jaanqaadka aduunka?
Ma ku fekeraysay inaad hesho meel aad ugu soo hagaagto arimahaan hoos ku qoran?
Inaad ogaato heerka ay marayso Technology-ga casriga ah
La socoshada shaqooyinka ka banaan wadanka
Ka warqabka wararka ganacsiga ee geyigeen
Helida iyo barashada cilmiga Computerka
Continue reading “Waxaan diyaarinay qaabab cusub oo shaqo”
Waakan ShareTwitterFacebookGooglePocketLinkedInEmail	Search
E-mail Nagala Soco
Si aysan kuu dhaafan Maqaaladeena halkaan kala soco
Email Address	Warbixinadii ugu Danbeeyey:	Waa Maxay Fayrska WannaCry, Sideese u Shaqeeyaa?
Indho Indhayn Golaha Wasiiradda Somalia
MACLUUMAAD FACEBOOK LAGA QORAY.
Sidee loosoo Celiyaa Falaash fayras kaa qariyey
Imtixaan Walba Sidee Loogu Gudbaa si fudud
Facebook Proudly powered by WordPress